'रबि दाई हाम्रो प्रश्नको उत्तर कहिले आउछ?'[भिडियो सहित] | The Mirror
January 22, 2021 January 30, 2021 adminLeaveaComment on ‘रबि दाई हाम्रो प्रश्नको उत्तर कहिले आउछ?'[भिडियो सहित]
काठमाडौँ, लोकप्रिय संचारकर्मी रबि लामिछाने news24 टेलिभिजन बाट आधिकारिक रुपमा बिदा भएका छन्। उनको ‘सिधाकुरा जनतासंग’ कार्यक्रमको लोकप्रियताले उनलाई एउटा जुजारु पत्रकारको रुपमा स्थापित गराएको छ। करिब चार वर्ष अगाडी ‘सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसंग’ को रुपमा सुरु भएपनि उक्त कार्यक्रमको नाम बिभिद कारणबस परिबर्तन गरी ‘सिधाकुरा जनतासंग’ राखिएको थियो।
उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य जनताका अनेकौ समस्या राज्य संचालकको आखा र कानसम्म पुराउनु थियो। तर बिडम्बना नै मान्नु पर्छ कुनै पनि समस्या राज्यले सुनेन। चार बर्ष सम्म रबि दाइले एउटै प्रश्न मात्र सोध, ”किन?”, हामीले रोजगारी पाएनै, बिरामी हुदा औषधी पाएनै, साहुले घरबारी लगिदियो, पनि छोएको निहुमा गाउ निकाला गरियो, नेता ज्वरो आउदा अमेरिका सिंगापुर जनताले सिटामोल पाएनन, जनताको खुटामा चप्पल छैन, नेता १८ करोडको गाडीमा, आदि आदि सयौ प्रश्नहरु। उनले आमाको कसम खाएर बोलेका छन कि जनताका यी प्रश्नहरुको जबाफ नआएसम्म यी प्रश्नहरु सोधिरहेने छन् र जनताको पक्ष्यमा बोल्न कहिलै छोड्ने छैनन्।
हामी पनि रबि दाईलाइ आगामी दिनहरुमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौ। हामी पनि पर्खिरहनेछौ रबि दाइले सोधेका सयौ प्रश्नहरुको जबाफ।
उनको बारेमा एकदमै मर्मस्पर्शी भिडियो छ। कृपया यो भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला…
Tagged good bye rabi dainews24rabi lamichhane